Gramdị telegram 2.98 dị ugbu a maka nbudata. Oku na-abịa na Mac | Esi m mac
Ngwa Telegram maka ndị ọrụ Mac ka natara ihe ndị ọrụ nke ngwa maka ngwaọrụ iOS nwere maka ụbọchị ole na ole, oku. Mgbe usoro nke mmelite n'usoro iji tinye ngwa izipu ozi na saịtị ya ozugbo edegharịrị ya na Swift, ngwa ahụ na-agbakwunye ugbu a nhọrọ ịme ma nata oku n'etiti ndị ọrụ ya.
O doro anya, a na-agbazikwa njehie na mbipute gara aga na ndị ọzọ, mana isi ọhụụ na mbipute a 2.98 ulo oru a awa ole na ole gara aga bụ kpomkwem ọrụ ka oku na-aga. Ọrụ nke anyị nwalere ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Oku ndị a doro anya dabere na ntanetị data ma ọ bụ njikọ WiFi, yabụ na ọ nwere ike ọ gaghị abụrịrị ihe kachasị mma na ahụmịhe metụtara oku ma na oku oku atọ anyị mere ka a nụ ya nke ọma, na-enweghị ọnya na ihe ndị ọzọ belụsọ na nke onye ahụ anyị kpọrọ bụ n'ime ụgbọ ala ma ọ gaghị ekwe omume ịkpọtụrụ ya. O nwere ike ịbụ na ọ bụ n'ihi okwu Bluetooth n'ime ụgbọ ala ma ọ bụ ihe yiri ya, mana ọ naghị arụ ọrụ n'ọnọdụ ahụ.
Iji kpọọ oku site na Mac anyị na onye ọrụ ọ bụla nwere ụdị ọhụụ na sistemụ abụọ, iOS 3.18 na macOS bụ 2.98Ihe anyị ga - eme bụ ịnweta onye ọrụ anyị chọrọ ịkpọ ozugbo (site na ịpị aha ha) na akara ekwentị ga - egosi na oke aka nri. Anyị na-pịa na windo na-egosi na oku na-amalite site na nhọrọ iji mechie igwe okwu ma kwụchie. Ozugbo anyị mere oku mbụ na nkata ederede, akara ngosi ekwentị na-egosi ozugbo iji nwee ike ịkpọ oku ndị ọzọ na-enweghị ike ịnweta profaịlụ onye ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Gramdị telegram 2.98 dị ugbu a maka nbudata. Oku na-abịa na Mac
Zere ibi ndụ ịnọ otu ebe site na iji Alerts Activity Hourly